Na teo aza ny toromarika : betsaka ny sekolim-panjakana nikatona | NewsMada
Na teo aza ny toromarika : betsaka ny sekolim-panjakana nikatona
Na teo aza ny toromariky ny minisiteran’ny Fanabeazana, samy nanana ny niatrehany ny fiandohan’ny herinandro ny sekoly rehetra teto an-dRenivohitra. Ho an’ny lycée Nanisana, kilasy 23 amin’y 34 no nandray ny fampianarana omaly tontolo ny andro, araka ny fanazavan’ny tale, Rabeantoandro Andriamiarana, omaly. Mifanahatsahana ny kilasy manomana fanadinana sy ny kilasy tsotra. Efa tapaka nandritra ny fotoana maharitra ny fampianarana ka rariny raha niverina amin’izany ho fitsinjovana ny mpianatra. Ho an’ny lycée Ampefiloha, niverina nody avokoa ny mpianatra fa tapaka tao anatin’ny fivoriamben’ny mpampianatra fa mbola hitohy ny fitokonana mandra-pivalian’ny fitakiana samihafa na koa efa hita soritra ny lalana hahazoana valiny momba izany, hoy ny fanambaran’ny mpampianatra avy ao amin’ny LMA. Mangataka koa izy ireo mba ho mpampianatra mahalala ny olan’ny mpanabe no hitantana ny minisiteran’ny Fanabeazana. Nanohana ny hetsiky ny mpampianatra eny amin’ny lycée Ampefiloha ny avy amin’ny lycée Jules Ferry Faravohitra. Tsy nianatra koa ny mpianatra avy amin’ny CEG Ampefiloha.
Noho ny toe-draharaha, nahemotra avokoa ny tetiandro hanatanterahana ny taranja fanatanjahanatena amin’ny fanadinana BEPC eto amin’ny faritra Analamanga.Tsy mbola voafaritra ny daty vaovao fa mampanantena kosa ny mpampianatra ny taranja fanatanjahantena fa tsy hisy ny taona fotsy. Mbola olan’ny mpampianatra ity taranja ity koa ny tsy fahatomombanan’ny fanefana ny “vacation” amin’ny fitsarana sy fanatanterahana ny fanadinam-panjakana.
Nitokona teny amin’ny CEG Antanimbarinandriana
Ho fampisehoana ny hery, nitokona teny amin’ny CEG Antanimbarinandriana avokoa ny mpampianatra tao anatin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra omaly maraina. Mangataka izy ireo ho olona avy amin’ny tontolon’ny fampianarana no apetraka ho minisitra. Hitohy rahampitso ny hetsika izay hanentanany ny mpampianatra avy amin’ny Cisco rehetra avy any amin’ny faritra.
Ho an’ny fampianarana teknika, nizotra tsara ny fampianarana rehefa tsy nisy intsony ny mpitokona nanakorontana tonga teny an-toerana.
Eny anivon’ny sekoly miahy tena, vita ny fandaharam-pianarana rehetra ho an’ny taranja samihafa ho an’ny kilasy hiatrika fanadinana. Miroso amin’ny fizarana ny mpampianatra mandra-pahatongan’ny fanadinana.
Androy: Appui de l’Etat aux jeunes 26/10/2020
Betafo: découverte d’une plantation de cannabis 26/10/2020
Antsiranana: les fokontany mis en avant 26/10/2020